Baarlamaanka Scotland oo taageeray aftida madax-banaanida - BBC News Somali
Baarlamaanka Scotland oo taageeray aftida madax-banaanida
29 Maarso 2017
Lahaanshaha sawirka SCOTTISH PARLIAMENT
Image caption 69 ayaa ogolaatay, 59na way diideen aftida
Baaqii Nicola Sturgeon oo ah wasiiradda 1aad ee Scotland, ee ahaa in la qabto afti labaad oo ku saabsan madax banaanida Scotland ayaa waxaa taageeray baarlamaanka.
Xildhibaannada ayaa ku taageeray 69 ogolaatay iyo 59 diidday in afti la qabto ka hor inta UK aysan ka bixin midowga yurub.
Ms Sturgeon waxay sheegtay in tallaabada loo baahday si reer Scotland loogu ogolaado inay go'aansadaan waddadii ay mari lahaayeen markii Britain ay go'aansatay ka bixidda midowga Yurub.
Image caption Nicola Sturgeon waxay sheegatay in ay rabto in wadahadal micne leh ay la gasho Ingiriiska
Laakinse xukuumadda UK waxay hore u sheegtay inay is hor taagi doonto aftida ilaa iyo laga gaarayo wixii ka dambeeya qorshaha ka bixidda midowga.
Ra'iisul wasaare Theresa May oo Ms Sturgeon kula kulantay Glasgow Isniintii ayaa mar kale tiri ayadoo ku adkaysanaysa "hadda ma aha wakhtigii" aftida.
Xoghayaheeda arrimaha Scotland, David Mundell, ayaa sheegay in jadwalka aan lagu dari Karin inta uu ka dhamaanayo hanaanka ay Britain kaga baxayso midowga Yurub.
Laakin Ms Sturgeon waxay sheegtay in hawsha loo igmaday ee ah codbixin kale ay tahay mid aan su'aal la gelin karin, waxayna intaa ku dartay in aysan doonayn inay isku dhacaan xukuumadda UK, balse ay doonayso wadaxaajood micne leh.
"Dadka Scotland waa inay helaan xaq ay ku kala doortaan Brexit (ka bixitaanka Britain ee midowga Yurub) ama ay noqdaan dal madax banaan si aan mustaqbalkeenna u qorshaysanno, una abuurno iskaashi sinnaan ku dhisan oo jasaa'irkan dhex mara" ayey tiri.
Waxay sheegtay in haddii madax banaani la doorto ay wadaxaajood niyadsami ku dhisan la gali doonto UK, ayna tanaasul diyaar u tahay. Haddii aan taa la dooranna waxay sheegtay in ciidda Easter-ka ka dib marka baarlamaanku soo laabto ay hor keeni doonto talaabooyin hore loogu sii soconayo.
Image caption Taageerayaasha xisbiga Green waxay doonayaan in madax banaani la qaato
Doodda baaralamaanka Scotland ayaa bilaabatay todobaadkii hore, laakinse waxaa hakad la geliyey markii uu weerarku ka dhacay Westminster.
Qorshaha madaxbanaanida waxaa isla wada xisbiga MS Sturgeon ee laga tirada badan yahay ee SNP oo taageero ka helaya Scottish Greens, ayadoo xisbiyada Liberal democrats, muxaafidka iyo shaqaaluhu ay diiddan yihiin.